एउटा मोबाइलको फोन नम्बर अर्कोमा सार्नुपर्‍यो भने यी पाँच तरिका प्रयोग गर्नुहोस -
एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा थर्ड पार्टी एप्सको मद्दतबाट पनि फोन नम्बर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । गुगल प्ले स्टोरमा contact transfer backup को कुनै एप्स हुन्छ । यसले मोबाइल नम्बरलाई ब्लूटुथ, वाईफाई, इमेलजस्तै गरी ट्रान्सफर गर्न सक्छ ।
Previous सलमान खान भने, “मैले ऊ जस्ती मायालु र सेक्सी लेडी अहिले सम्म भेटेकै छैन।” आखिर कसलाई भने सलमान खानले ?
Next बिश्वकै सबैभन्दा महँगो महलको मालिक साउदीका राजकुमार ! (फोटोसहित)